Momba anay - Kale Fans
Ny zavatra ifantohanay dia ny fisian'ny vokatra sy ny lazan'ny tsena, miziriziry amin'ny fampiasana ny teknolojia faran'izay tsara, ny endrika tsara indrindra ary ny foto-kevitra mandroso indrindra hanaovana ny vokatra tsara indrindra eran-tany.
Manamboatra vokatra tsara, manolotra serivisy tsara.
Fahatsoram-po, Fanajana, fifantohana, fanoloran-tena.
Vina momba ny orinasa
Mankafy izao tontolo izao, laza eran'izao tontolo izao.
KNy mpankafy ale dia manam-pahaizana manokana amin'ny mpankafy HVLS nanomboka tamin'ny taona 2010, mitazona hatrany ny fanavaozana sy fanavaozana hanampy amin'ny famahana ny olana momba ny rivotra sy ny fampangatsiahana isan-karazany.
Kale Fans dia mamokatra fantson-drivotra, fantson-drivotra, fantson-davenona ary fantson-davenona ho an'ny fampiharana samihafa miaraka amin'ny savaivony manomboka amin'ny 6.5ft ka hatramin'ny 24ft.
Kale no mpisava lalana amin'ny indostrian'ny mpankafy ara-barotra. Kale dia nitana ny toerana voalohany tamin'ny tsenan'ny mpankafy valindrihana indostrialy an-trano ary naondrana tany amin'ny firenena 80 eran'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao, nanangana atrikasa 80.000 metatra toradroa izahay mba hiantohana ny famatsiana, nanangana foibe R&D 3.000 metatra toradroa mba hamolavola sy hampisehoana, nanangana birao sy sampana manerana ny firenena mba hanomezana serivisy tsara kokoa.
Izahay no mpamokatra mpankafy HVLS malaza eran'izao tontolo izao izay ampiasaina amin'ny trano fanatobiana entana lehibe, orinasa, foibe fizarana, toeram-pivarotana, toeram-pivarotana sns.
Mpankafy Kale - ny safidinao tsara indrindra, tongava ary hiaraka aminay!
Kale Fans, natokana ho an'ny orinasan'izao tontolo izao manolo-tena amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana. Isika no mpamokatra mpankafy HVLS malaza eran-tany izay ampiasaina amin'ny trano fanatobiana entana lehibe, orinasa, foibe fizarana, toeram-pivarotana, toeram-pivarotana, sns. Mpankafy indostrialy / varotra haingam-pandeha avo lenta, vahaolana tonga lafatra ho an'ny fanaraha-maso ny toetr'andro amin'ny trano indostrialy sy toerana ho an'ny daholobe.
Manome fampahalalana ara-teknika tsy tapaka sy fanohanana ara-teknika.